वेनिशालाई आफ्नै स्टारडम भर्सेस सौगातको साथ, कुन फाप्ला ? « Mazzako Online
वेनिशालाई आफ्नै स्टारडम भर्सेस सौगातको साथ, कुन फाप्ला ?
केही बर्ष फिल्म क्षेत्रमा बिताएपनि अभिनेत्री वेनिशा हमालको करिअर सुखद हुन सकेको छैन । वेनिशा सफल फिल्मको खोजीमा दौडिएको केही बर्ष भैसकेको छ । तर, उनी सफल हुन नसक्दा उनलाई निर्माताले त्यती साह्रो पत्याएका छैनन् ।
उनै, वेनिशा अब आफ्नो स्टारडम र अभिनेता सौगात मल्लको स्टारडमको बिचमा दौडिएकी छिन् । बेनिशालाई नै शिर्ष भूमिकामा लिएर निर्देशक मिलन चाम्सले फिल्म ‘ब्लाइन्ड रक्स’ निर्देशन गरिसकेका छन् । यो फिल्म चल्नका लागि वेनिशा र यसको कथावस्तु चल्न पर्छ ।
अर्कोतिर, अभिनेता सौगात मल्लसँग उनले काम गरेको फिल्म ‘झ्यानाकुटी’ भदौ ८ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । यो फिल्म सफल हुनका लागि सौगात मल्लको स्टारडम पनि चल्नुपर्नेछ । वेनिशालाई दुबै फिल्म चल्दा फाइदा हुने निश्चित छ । यी दुबै फिल्मले उनको करिअरको मुख्य विन्दु पत्ता लगाउनेछ ।